ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်မယ့် ကိုရီးယားမင်းသမီး ကလောက်ဒီယာကင် | မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
» ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်မယ့် ကိုရီးယားမင်းသမီး ကလောက်ဒီယာကင်
ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်မယ့် ကိုရီးယားမင်းသမီး ကလောက်ဒီယာကင်
တာင်ကိုရီးယားသရုပ် ဆောင်မင်းသမီး ကင်ဆူဟွန်းခေါ် ကလောက်ဒီယာကင်သည် ဟော လိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား The Dark Tower ၌ အီဒရစ်အယ်လ်ဘာနှင့် မက်သရူးမက်ကွန်နာဟေးတို့နှင့် အတူ သရုပ်ဆောင်မည်ဖြစ် သည်။
The Dark Tower ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားသည် အမေရိကန် စာ ရေးဆရာ စတီဖင်ကင်း ရေးသား သော ဝတ္ထုကို အခြေခံရိုက်ကူး မည့် သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ် သည်း ထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ယင်းဇာတ်ကားတွင် ကလောက်ဒီ ယာကင်က Arra Champignon ဟူသော ဇာတ်ရုပ်ကို သရုပ် ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသရုပ် ဆောင်ရမည့် ဇာတ်ရုပ်အသေး စိတ်ကိုမူ အေဂျင်စီက ထုတ်ဖော် ပြောကြားခြင်းမရှိပေ။
ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ကလောက်ဒီယာကင် သည် Marco Polo ရုပ်သံဇာတ် လမ်းတွဲနှင့် Avengers:Age of Ultron ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု မင်း သမီးတစ်လက်ဖြစ်လာသည်။ ကလောက်ဒီယာကင်သည် Monster ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက် ကူးရေးပြီးနောက် The Dark Tower ဇာတ်ကားရိုက်ကူးရန် တောင်အာဖရိကသို့ သွားရောက် မည်ဟု ၎င်း၏အေဂျင်စီက ပြော သည်။
Ref ===> The Korea Time
: ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်မယ့် ကိုရီးယားမင်းသမီး ကလောက်ဒီယာကင်
: တာင်ကိုရီးယားသရုပ် ဆောင်မင်းသမီး ကင်ဆူဟွန်းခေါ် ကလောက်ဒီယာကင်သည် ဟော လိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား The Dark Tower ၌ အီဒရစ်အယ်လ်ဘာနှင့် မက်သရ...
Chanbara Striptease (2008) 18+ HD
Private Island (2013) 18+ HD
The Purge: Election Year (2016) HD လုံးဝ အကြည်
ဖုန်း Call Recorder အလန်းစားလေး - Call Recorder Pr...
ဖုန်း Lock Screen ဒီဇိုင်းအလန်းစားလေး - Lock Scree...
ကားပြိုင်မောင်း ဂိမ်းကောင်းလေး - No Limits Rally M...
လမ်းဖိုက်တာ နေရာကနေ တိုက်ခိုက်ကစားရမယ့် - Fight Cl...
ဖုန်းမှာ ဖျက်ခြင်တဲ့ Apk ကို Data memory မကျန်အောင...
Prisma app လေး Android အတွက် တရားဝင်ထွက်ရှိ - Pris...
Facebook က Video တွေကို အလွယ်ဒေါင်းယူနိုင်တဲ့ - F...
Net Guide Journal ( Vol-4, No-44 )
CSI စုံထောက်နေရာကနေ မှုခင်းတွေ ဖော်ထုတ်ရမယ့်ဂိမ်းလေ...
တိုက်လေယာဉ်စစ်တိုက် [45.3 MB] [APK]
ရှေ့တန်းစစ်သား [6.8 MB] [APK]
ဖုန်း launcher ရိုးရှင်းတဲ့ ဒီဇိုင်းအလန်းလေး - Sma...
ဘောလုံးဂိမ်းဗားရှင်းအသစ်လေး - Dream League Soccer ...
SPD Firmare Back-up Tool
ညီငယ်တွေအကြိုက် ဂိမ်းကောင်းလေး - MARVEL Avengers A...
ဒိုရေမွန် ပါဝါဆက် ကဒ်ဂိမ်းကောင်းလေး - Doraemon Gad...
ကားသူခိုးဂိမ်းကောင်းလေး - GTA: Liberty City Storie...
ဖုန်းကိုပေါ့ပါးသွက်လက်စွာအသုံးပြုနိုင်စေမယ့် - Cle...
မြိုတည်တည်ဆောက်ရမယ့်ဂိမ်းလေး - City Island 4: Sim ...
GO Launcher ဒီဇိုင်းအလန်းစားလေး - Obsidian GO Laun...
Easy PC Optimizer v1.3.0.120 Crack Full နောက်ဆုံးဗ...
The Funhouse Massacre 2015(HD)+881.9 Mb+ရုပ်သံ/အကြ...
Now You See Me2( 2016)
Allegiant 2016(HD)+(1.6 GB) ရုပ်သံ/အကြည်
နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ Paypal App 6.4.2
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Oxford Dictionary Of English Prem...
Baby Children For Photoshop Format - PNG Size(2MB)...
Android Application ရေးသားခြင်းနည်းပညာ
Android Application ရေးသားခြင်းနည်းပညာ Part 2
Box Crack Portable (Just Run Loader as Admin) By M...
My Folder Pro & Professional private document mana...
Batman Injustice Edition S7 EDGE ပြည်တွင်းဈေးကွက်...
Viber 6.1.5.93 ( 37.8MB )
ကမ္ဘာ နံပါတ် 1 လူဆော့အများဆုံးဂိမ်းလေး - Pokémon GO...
ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း တိုက်ခိုက်ကစားရမယ့် - BloodWarr...
ဖုန်းမှာ သီချင်း တွေကို အကောင်းဆုံနားဆင်နိုင်တဲ့ -...
ဖုန်း Launcher ကို window ဒီဇိုင်းအတိုင်းအသုံးပြုန...
iOS 10 public Beta 1 ကို ဘယ်လိုတင်မလဲ ?
ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်မယ့် ကိုရီးယားမင်းသမ...
Mobile ဖုန်း Driver, Root နှင့် PC Suite များ စုစည...
ကွန်ပျူတာဖြင့် Apple ID အလွယ်ဖွင့်နည်း စာအုပ် (ဇူး...